Métera Smart & vokatra farany
Solombavambahoaka Modules taratra solika PV
Jiangsu Linyang Energy Co, Ltd dia naorina tamin'ny 1995 tao Qidong, Chine izay manana renivola voatonona $ 270 tapitrisa ary hevitra manova ny fananana andraikitra mahomby amin'ny indostrian'ny angovo sy ny fitsinjaram-pahefana mendrika. Nanohy ny tantaram-pahombiazantsika teo amin'ny tsenan'ny angovo an-trano sy iraisam-pirenena tamin'ny alalàn'ny orinasa mihoatra ny 150, mpikambana ao amin'ny ekipa R&D manam-pahaizana 550 ary nanatsara ny Smart Grid sy ny Smart Marketing Solutions.
Manana ekipa teknika R&D matihanina matanjaka izahay, miantoka ny fampandrosoana avo lenta amin'ny haitao vokarintsika ary mitaky tanteraka ny fangatahan'ny mpanjifa. Ary manana ekipa serivisitra ho an'ny varotra ihany koa izahay natokana ho an'ny mpanjifanay.
Malaza eran'izao tontolo izao miaraka amin'ireo vokatra avo kalitao izahay. Miaraka amin'ny rafi-pitantanana fanaraha-maso kalitao hentitra avy amin'ny fitsirihana labana hatramin'ny famokarana orinasa, dia miantoka tanteraka ny vokatra rehetra ataonay ny fenitra indostrialy indiana ilaina.
Miaraka amin'ny mpiasa maherin'ny 3000 sy atrikasa mirefy 70,000 metatra toradroa sy atrikasa fanamorana ny fanamorana ny fitaovana manerantany, ny fahafahantsika famokarana dia afaka mameno tanteraka ny fitakian'ny tsena anatiny sy any ivelany.
Single Dingana Smart Meter Energy , Single dingana Tou Meter , Single dingana Electric Meter , Single dingana voaloa vola mialoha Meter , Single dingana Meter , Single Dingana voaloa vola mialoha angovo Meter .